Dharka dabbaasha ee ragga: noocyada iyo astaamaha | Ragga Stylish
Dharka dabaasha ee ragga
Jarmal Portillo | | fashion
Mid ka mid ah dharka kulaylka badan xagaaga ayaa ah dharka dabbaasha ee ragga. Ma aha oo kaliya waxtar in lagu qaato maalinta xeebta, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa barkadda, marka aad ciyaareyso kubbadda laliska ee xeebta, ku soo lugee lugeynta jidka socodka ama qorraxda meel kasta. Waxaa jira noocyo aad u fara badan oo dharka ragga ah oo loogu talagalay inay la jaan qaadaan kharashyada iyo jidhkaba. Waxa kale oo jira noocyo ku xidhan isticmaalka la siinayo iyaga.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan astaamaha iyo noocyada dabbaasha ragga.
1 Noocyada dharka dabbaasha ragga
2 Qalabka iyo cabirka
3 Dharka dabaasha ragga ugu fiican
Noocyada dharka dabbaasha ragga
Waxaa muhiim ah in la ogaado noocyada kala duwan ee dharka ragga, qalabka iyo cabirka jira. Sidan oo kale, waxaad si fiican u dooran kartaa waxaad iibsato oo aad go'aan fiican ka gaarto. Waxaan farta ku fiiqeynaa noocyada ugu waaweyn ee jira iyo waxa isticmaalka badanaa la siiyo mid kasta oo ka mid ah. Jawaabta nooca dabbaasha ee la iibsado waxaa si fudud looga jawaabi karaa raaxada aad u baahan tahay. Waxay kuxirantahay inaad ubaahantahay wax kabadan ama kayar, waxaad awoodi doontaa inaad uga faa'iideysato astaamaha sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan. Laga yaabaa in aad dooro dharka dharka lagu dhejiyo ee dhererka dheer oo leh midabbo aad u soo jiidasho badan ama gaaban.
Qoraallada kooban ayaa leh goos goos u eg kan bikini-ka waxayna badanaa u baahan yihiin dadka dabaasha. Tani waa sababta oo ah, qaab dhismeedkooda awgeed, kuma faragelinayaan dhaqdhaqaaqa lugaha biyaha hoostooda. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawiyaan sidii ay ula qabsan lahaayeen jirka si sax ah oo waxay door bidaa hoos u dhaca iska caabinta iyo kororka xawaaraha biyaha hoostooda.
Waxaa jira moodooyin kala duwan oo ah Waxay leeyihiin elastics oo ka caawiya la qabsashada dhexda. Qaar kale waxay xukumeen hagaajinta iyo xarig si ay si aamin ah ugu hayaan booskooda. Xulashadan labaad waa mid aad u raaxo badan oo la doortay tan iyo markii ay kuu oggolaaneyso inaad habeyso sida aad u rabto inaad u xirato dharka dabbaasha.
Qalabka iyo cabirka
In kasta oo dharka lagu iibiyo ragga ugu iibka badan loogu talagalay meelaha leh qorrax badan, biyaha badda, biyo koloriin leh, dabayl iyo waxqabadyo kale oo bannaanka ah, moodooyinka qaarkood ayaa sidoo kale si gaar ah loogu talagalay in loogu isticmaalo si gaar ah oo gaar ah. Sidii aan hore u soo sheegnayba, mid ka mid ah waxqabadyada Badanaa waxaa la dalbadaa marka la isticmaalayo dharka dabbaasha waa dabaal xirfad leh ama dabaasha. Sababtaas awgeed, waxaa suurtagal ah in la helo dharka dharka lagu dabaasho oo kala duwan oo ka samaysan waxyaabo aad u adkaysi badan oo u adkeysan kara koloriin ama barkadda cusbada muddo dheer
Maaddada dharka ragga ayaa ah qodobka go'aaminaya qiimaha. Inkasta oo si yar, midabada, noocyada qaab-dhismeedka ama adeegsiga ficil ahaanta loo kiciyey si loo siiyo sidoo kale saameyn. Haddii aan rabno moodel u adeegta inuu awood u yeesho inuu sida ugu dhakhsaha badan u qalalo, qiimihiisu waxay u badan tahay inuu ka sarreeyo. Taasina waa dharka dabbaasha ayaa loo baahan yahay maxaa yeelay waxaa jira shirar bulsheed oo badan oo aad u baahan karto inaad ku qalajiso dharka dabbaasha sida ugu dhakhsaha badan.
Raaxo waa qodob kale oo lagu xisaabtamo oo ku saabsan qalabka loo qaabeyn doono. Waa inaan maskaxda ku haynaa in dharka dabbaasha uu si toos ah ula xiriiro maqaarkaaga iyo meelaha xasaasiga ah. Waa wax caadi ah in dharka dabbaasha uu dhalin karo khilaaf joogto ah. Tani waa wajiga ay tahay inaad tixgeliso si aad u doorato maaddada sida ugu macquulsan uguna raaxada leh shaqsi ahaan.
Marka laga hadlayo cabirka dharka ragga, waxay aad uguxirantahay nooca aan iibsaneyno. Cabbirka iyo walxaha waa astaamo si dhow isugu xidhan. Waa inaan tixgelin siino cabirka iyadoo kuxiran qaabka iyo nooca jirkeena. Sidan oo kale, waxaan awood u leenahay inaan doorto qaab si fiican ula jaan qaadaya qaab dhismeedka jirkeena iyo howlaha aan qaban doonno. Dhinacaan, haddii aad doorato dharka dabbaasha si aad ugu tagto xeebta ama barkadda way ka duwanaan kartaa haddii aad u isticmaali doontid dabaasha. Haddii salka mar mar ka badan la isticmaalo waxaad u oggolaan kartaa naftaada in lagaa qaado dhadhan shakhsiyeed oo ka sarreeya dhinacyada intiisa kale.
Dharka dabaasha ragga ugu fiican
Waxaan sameyn doonnaa liis kooban oo ku saabsan dharka ragga ugu fiican:
Waqtiga firaaqada Speedo: Waa nooc soojireen ah laakiin leh naqshad casri ah. Waxay leedahay dhar jilicsan oo fudud oo ka samaysan naylon. Waxay leedahay dhammeystir-celin biyo-celin celiya oo gacan ka geysanaya yareynta nuugista biyaha.
Kfnire: Waa nooc ka mid ah kuwa ugu fiican ee iibiya saamigiisa tayada-wanaagsan ee wanaagsan. Waa moodel iska caadi ah oo qaab gaaban leh laakiin taasi waxay leedahay dhexda laastik ah iyo xarig u gaar ah qaab shaqsiyeed. Waxay leedahay qallajin xoogaa deg deg ah iyo dabool biyo celin kara.
Gawaarida maalinlaha ah ee 'Quiksilver': halkan waxay ku dhacdaa qaybta dharka sare. Ragga dabaasha ragga ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay ku raaxaystaan ​​xeebta ama barkadda. Si kastaba ha noqotee, qiimaha wuu kala duwanaan doonaa.
Baaxada weyn ee Boss: Waa dabaasha ugu fiican ee lagu raaxeysto xeebta ama barkadda dhexdeeda iyadoo qaab uun la adeegsanayo. Waxaa lagu sameeyaa walxaha polyamide oo bixiya waxyaabo badan oo cusub oo raaxo leh. Waxaa laga yaabaa in muuqaalka aan ka dhigin dharka lagu dabaasho mid ka mid ah kuwa ugu fiican waa inaysan haysan dabool aan biyuhu la socon karin sida moodooyinka kale. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu heli karaa 18 midab oo kala duwan. Waxay ka kooban tahay rinji fidsan dhererkuna wuxuu gaarayaa korka jilibka. Waa xulasho kuwa xiisaha badan leh.
Hawitton: Waa dhar dabbaal oo loogu talagalay ragga oo fidsan oo dhaqso u qalalaya. Waxaa laga sameeyaa 95% nylon iyo 5% spandex. Thanks to qalabkan waxay bixisaa raaxo aad u wanaagsan. Waxaad ku leedahay raaxo gudaha iyo dibaddaba. Qaabkani waa noocyo kaladuwan oo loogu talagalay dabaasha iyo xeebta ama xilliyada firaaqada. Waxay leedahay xarig dhejis ah oo dhexda lagu dhejiyo iyo mesh gudaha ah si aad si fiican ugu dhaqaaqdo oo aad dhinac ugu furto.
Keecow: Waxay u tahay tusaale kuwa dhadhanka u leh dharka midabbada badan leh iyo qaab aan qarsooneyn. Waa jilicsan oo raaxo leh maqaarka mana laha kubado timo. Waxay ka sameysan tahay polyester. Waxay leedahay dhexda laastik ah oo ka dhigaysa mid fudud in la kiciyo ama la saaro iyo mesh gudaha ah oo lagu siiyo raaxo dheeraad ah.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto noocyada kala duwan ee dharka ragga iyo waxa astaamahoodu yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dharka dabaasha ee ragga